Hindiya oo heshiis ay ku iibsanayso 36 diyaaradaha dagaalka ah la gashay Faransiiska - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldHindiya oo heshiis ay ku iibsanayso 36 diyaaradaha dagaalka ah la gashay Faransiiska
September 23, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Wasiirada difaaca wadamada Hindiya iyo Faransiiska oo kala saxiixday heshiis ay Hindiya ku iibsanayso 36 diyaaradood oo nooca dagaalka Faransiiska saameyo ah. Sawirka: EPA.
New Delhi-(Puntland Mirror) Hindiya ayaa heshiis la saxiixatay ay ku gadanayso 36 diyaaradaha dagaalka (Rafale) ee Faransiiska sameeyo, iyadoo dhaqaalaha ku baxaya uu yahay $8.7 bilyan, heshiiska ayaa noqonaya kii kowaad oo dalka Hindiya ku gato diyaarado dagaal muddo tobonaan sanno ah.
Marka ugu horeysa oo diyaaradaha la fiayo in ay Hindiya yimaadaan ayaa ah sanadka 2019, waxayna Hindiya doonaysaa in 36-da diyaaradood ah lix sanno gudahood ay ku hesho.
Wasiirka difaaca Faransiiska Jean-Yves Le Drian iyo dhiggiisa Hindiya Manohar Parrikar ayaa heshiiska maanta oo Jimce ah ku kala saxiixday gudaha magaalada New Delhi.
Manohar Parrikar ayaa sheegay in heshiiskaas uu hagaajin doono duqaymaha Hindiya iyo awooda difaaca.
Raysulawasaaraha dalka Hindiya Narenda Modi ayaa horey u balanqaaday in uu kor u qaadi doono ciidamada difaaca Hindiya.
January 18, 2017 Turkiga iyo Ruushka oo wada qaadaay howlgalkii kowaad ee dhanka hawada Suuriya ah
December 4, 2019 WHO oo sheegtay in isbedelka Cimilada uu khatarta ugu weyn ku yahay caafimaadka dunida qarniga 21-aad
Ugu yaraan labo askari oo ku dhintay isku-dhac saaxiibtinimo oo dhexmaray ciidamada DFS oo ka dhacay magaalada Jowhar
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada dowladda Puntland ayaa maanta oo Axad ah labo xubnood oo Al-Shabaab ah ku xukuntay dil toogasho. Isaga oo saxaafada kula hadlayay magaalada Boosaaso, guddoomiyaha maxkamada ciidamada Puntland Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa [...]